नाफामा गएपछि आइपिओ ल्यायाैं- www.nagariknews.com : Shivam Cement
नाफामा गएपछि आइपिओ ल्यायाैं- www.nagariknews.com
Link = www.nagariknews.com
नाफामा गएपछि आइपिओ ल्यायाैं
सोमबार, ०७ साउन २०७५, ०७ : ०७ | नागरिक
औद्योगिक घराना लक्की ग्रुपका अध्यक्ष सतिषकुमार मोर नेपाल उद्योग परिसंघ(सिएनआई)का वरिष्ठ उपाध्यक्ष पनि हुन् । शिवम् सिमेन्टका प्रवर्द्धक समेत रहेका मोरसँग औद्योगिक क्षेत्रको लामो अनुभव छ।
मोर प्रवर्द्धक रहेको शिवम् सिमेन्टले पव्लिक कम्पनीको रुपमा पहिलो पटक उद्योग क्षेत्रका स्थानीय र सर्वसाधरणको लागि प्राथमिक सेयर (आइपिओ) जारी गर्ने तयारी गरेको छ । विगत तीन वर्षदेखि निरन्तर नाफामा गएपछि शिवम् सिमेन्टले आइपिओ निष्काषन गर्ने अनुमति पाएको हो । नेपालमा सिमेन्ट बजारको अवस्था, चुनौती, अवसर लगायत समग्र मुलुकको अर्थतन्त्रको बारेमा मोरसँग नागरिककर्मी दिलीप पौडेलले गरेको कुराकानी :
साउन १३ गतेदेखि स्थानीयको लागि दुई प्रतिशत छुट्टयाएका छौं । आठ लाख ८० हजार कित्ता सेयर २५ प्रतिशत छुट दिन लागेका हौंं । स्वीकृत भएको चार सय रुपैयाँमा स्थानीयलाई तीन सय रुपैयाँमा दिने तयारी गरेका छौं । आह्वान पत्र ३ गते आइसकेको छ।
तीन सय ८७ करोड २० लाख रुपैयाँ छ।
दुई प्रतिशत प्रभावित क्षेत्र र १० प्रतिशत साधारण जनतासहित कुल १२ प्रतिशत पव्लिकमा जान्छ।
हामीले एउटैमात्र शिवम् ब्राण्ड बनायौं । नेपालमा तीन थरीका सिमेन्ट भए पनि ओपिसी मात्र बनाएका छौं । हामी आउँदा १०÷१२ प्र्रतिशत ओपिसीको बजार थियो ।
उत्पादन सुरु गर्दा सात सय टन ग्राण्डिङ र १२ सय टन क्लिंकरबाट सुरु गरेको हो । अहिले क्षमता बढाएर तीन हजार टन ग्राण्डिङ र १९ सय टन क्लिंकरमा गएका छौं।
बजार बढिरहेको छ । भूकम्प पछि १०-१२ प्रतिशतका ग्रोथ थियो । अहिले२० प्रतिशत ग्रोथ रहेको छ । गुणस्तरीय निर्माण सामग्री प्रयोग गर्नुपर्छ भन्ने भूकम्पले पाठ सिकाएको छ । पूर्वाधार निर्माण विगतमा कमी थियो ।
अहिले पनि कम छ । तर, पूर्वाधारका परियोजना अघि बढेका छन् । स्थानीय, प्रदेश, संघीय सरकारको निर्वाचन भएर मुलुक सम्वृद्धिमा अघि बढेकाले सिमेन्ट उद्योगको अवसर अझै बढिरहेको छ । किनकी मुलुक निर्माणमा अघि बढेको छ । अब आर्थिक क्रान्तिमै अघि बढ्ने हो।
नेपालमा प्रचुरमात्रमा लाइन स्टोन रहेको छ । यसमा सरकारको इच्छाशक्ति भयो भने विकास गर्न सक्छौं । चुन ढुंगाको गुणस्तर पनि राम्रो छ । वन, खानीका नीतिगत समस्याले केही झंझट रहेको छ । वनको उपभोग गर्दा त्यतिकै क्षेत्रफलमा सरकारलाई जग्गा उपलब्ध गराउनु पर्ने अवस्था छ ।
यसले केही समस्या हुन्छ । नेपालमा जग्गा किन्न भनेको निकै कठिन छ । धेरै क्षेत्रफलमा जग्गा पाउननै समस्या छ । चुन ढुंगा उपभोग गरेपछि त्यो जग्गा सरकारकै हुने हो । बरु सरकारले दस्तुर लिएर यो झन्झट हटाउनु पर्छ । वनमन्त्रीसँग समस्याको बारेमा ध्यानाकर्षण गराएका छौं । यो समस्या समाधान भए उद्योग सञ्चालन गर्न सघाउ पुग्छ । यसले व्यापार घाटा कम गर्न पनि सघाउ पुग्छ।
नेपालमा गुणस्तरमा प्रतिस्पर्धा हुनु राम्रो हो । आ–आफ्नो ब्राण्ड र क्वालिटी अनुसार मूल्य निर्धारण भैरहेको छ । खुल्ला अर्थतन्त्रमा कार्टेलिङ गर्नु हुँदैन । सबैको आफ्नै सप्लाई सिस्टम र मूल्य रहेको छ । सरकारले यातायात क्षेत्रमा देखिएको कार्टेलिङ हटाउन पहल गरेको छ । त्यो सकरात्मक हो।
नेपालमा शिवम् सिमेन्ट परिवारले प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (एफडिआई) ल्याएको छ । चीनको ३२-३३ कम्पनी भएको होङ्सीलाई ल्याएका छौं ।
सबैले पार्टनरसीप गर्ने खोजे पनि उसले शिवम्लाई रोज्यो । ज्वाइन्ट भेन्चरमा हामीले काम गरेको हो । १५–१७ महिनामै सिमेन्ट उत्पादन गर्न सफल भएका छौं । यसले विदेशी साझेदारपनि उत्साहित भएका छन्।
सरकारले ल्याएको बजेट र मौद्रिक नीतिलाई निजी क्षेत्रले कसरी हेरिरहेको छ ?
सरकारले बजेटमा सबै क्षेत्रलाई समेट्न खोजे पनि पूरा गर्न सकेन । बजेट अपेक्षित नआए पनि मौद्रिक नीतिले उद्योगी, व्यवसायीलाई उत्साहित बनाएको छ । सरकारले आठ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको जुन लक्ष्य लिएको छ । त्यो पूरा गर्न मौद्रिक नीतिले सघाउ पुग्ने देखिन्छ । लिक्युडिटी क्रन्चको समस्या थियो ।
अहिले मौद्रिक नीतिले सम्बोधन गरेको छ । निजी क्षेत्रले पनि माग गर्दै आएको थियो । धेरै छुट दिएको छ । नीतिगत रुपमा कार्यबिधी बनाएर दीर्घकालीन रुपमा अन्य समस्या पनि समाधान होस् भन्ने चाहान्छौं । अहिलेसम्म मुलुक रेमिटेन्सले धानेको छ । व्यापार घाटा निकै बढेर गएको छ । अहिले वैदेशिक रोजगारी घट्दा रेमिटेन्स घटेको छ । स्वदेशमा रोजगारी सृजना गर्न नसक्ने हो भने झन् ठूलो समस्या आउँछ।
नेपालमा कुन क्षेत्रमा लगानीको सम्भावना देख्नुहुन्छ ?
मुलुकमा औद्योगिकीकरण गर्नुपर्छ । राजनीतिकिकरण गर्ने होइन र साँच्चिकै आर्थिक सम्वृद्धिमा जाने हो भने पाँच वटा विषयलाई राज्यले प्राथमिकता दिनुपर्छ । हाइड्रो, टुुरिजम्, खानीजन्य उद्योगमा लगानी भित्राउनु पर्छ । यी उद्योगमा स्वदेशी कच्चा पदार्थ प्रयोग गर्न सकिन्छ । शिक्षा र मेडिकल हब बनाउनु पर्छ।
सरकारले वातावरण बनाए लगानीको लागि प्रयाप्त पूँजी छ त ?
निस्चयनै । लगानीको लागि पूँजीको अभाब छैन । सरकारको इच्छाशक्ति चाहिन्छ । शिवम् सिमेन्टलाई ११ वटा बैंकले करिब तीन सय करोड रुपैयाँ बढि ऋण दिएर हाम्रो परियोजना अघि बढेको हो । बाहिरबाट पनि परियोजना आउने सम्भावना उत्तिकै छ।
एफडिआइको सम्भावना के छ ? लगानीकर्ताले कस्तो वातावरण खोजिरहेका छन् ?
एफडिआईको मर्म अनुसार लगानी आउन सकेको छैन । तर,विभिन्न मन्त्रालयको भन्झटिलो प्रक्रियाले कठिनाई भएको छ । लगानीको लागि एकद्वार प्रणालीबाट कानुनी भन्झट हटाउनु पर्छ ।
लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्ने नीति ल्याउनु पर्छ । हामीलाई ठूलो लगानी आवश्यक छ भन्ने प्राथमिकीकरण गर्नु पर्यो । जस्तै भारतको गुजरातमा कसैले लगानी गर्न चाह्यो भने त्यहाँका सचिव होटलमै भेट्न आउँछन् । के–के चाहियो भनेर सुविधा दिन्छन् ।